Usoro Microstation - Geofumadas
Microstran N'ezie: nhazi usoro
AulaGEO, wetara gị usoro ọhụụ a lekwasịrị anya na nhazi nke ihe eji arụ ọrụ, na-eji sọftụwia Microstran, site na Bentley Systems. Usoro ahụ gụnyere nkuzi nke ihe dị iche iche, itinye ngwa ngwa na ọgbọ nke nsonaazụ. Okwu mmeghe nke Microstran: nyocha ihe omimi Microstran toolbars na ọrụ functionsdị mfe ihe nlere
Bentley Systems Nhazi usoro B Usoro microstation
Usoro STAAD.Pro - nhazi nhazi
Nke a bụ usoro mmeghe na nyocha na imepụta ihe owuwu site na iji ngwanrọ STAAD Pro site na Bentley Systems. N'ime usoro a, ị ga-amụta ịlele nchara na ihe owuwu, kọwaa ibu ma mepụta akụkọ. N’ikpeazụ ị ga-amụta ịlele, nyocha na imewe slabs. Geometry na Modelling (Nchara na Ihe Ọkpụkpọ) Nkọwa Ibu Ibu ...
Microstation Agụmakwụkwọ - Mụta atụmatụ CAD
Microstation - Mụta CAD Design Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmụta otu esi eji Microstation maka njikwa data CAD, usoro a bụ maka gị. N'ime usoro a, anyị ga-amụta ntọala Microstation. Na mkpokọta nke ihe iri abụọ na asaa, onye ọrụ ga-enwe ike ịghọta ihe niile bụ isi. Ozugbo anyị mechara usoro mmụta, anyị ga-aga n'ihu na ...
Bentley Systems Usoro microstation